Dib u eegida Guriga Ardayga Qaranka 2022 - Wareega Dhaqaalaha
Bogga ugu weyn Dib u eegida Guriga Ardayga Qaranka 2022
Siinta xalal cusub oo wax ka qabta warbixinta, xaqiijinta, qoraalka qoraalka, iyo shuruudaha isdhaafsiga xogta ee barayaasha, National Student Clearinghouse® waxay ka caawisaa waxbarashada inay sii socoto.
Dhab ahaantii waxay ku socdaan jihada saxda ah marka ay timaado bixinta helitaanka xogta la aamini karo, adeegyada la xidhiidha, iyo aragtida bulshada waxbarashada iyo xoogga shaqada.
Dhammaan kharashyada la xiriira waxbarashada iyo waxbarashada waa adeegyada aasaasiga ah ee waxbarashada. Kharashyada macalimiinta, dhismayaasha dugsiga, agabka waxbarashada, buugaagta, waxbarashada ka baxsan, iyo maamulka waa in sidoo kale lagu daraa.
Maqaalka soo socda ayaa ka kooban macluumaad badan oo ku saabsan National Student Clearinghouse® si uu kaaga caawiyo inaad si fiican u fahamto ururkan.
Ku saabsan Guriga nadiifinta
Urur waxbarasho oo aan faa'iido doon ahayn oo bixiya warbixinta waxbarashada, xaqiijinta, iyo adeegyada cilmi-baarista ee Waqooyiga Ameerika kuliyadaha iyo jaamacadaha gudaha Guriga Nadiifinta Ardayga Qaranka. Waxaa jira 3,600 kulliyadood oo ku jira shabakadda NSC, oo ka dhigan 97 boqolkiiba ardayda dhigata dugsiga sare kadib. NSC waxaa la aasaasay July 2, 1993, Herndon, Virginia. Adeegyadeedu waxay ka caawiyaan dugsiyada inay buuxiyaan shuruudaha u hoggaansanaanta ee hoos timaada Xeerka Xuquuqda Waxbarashada Qoyska iyo Qarniga iyo Sharciga Waxbarashada Sare.
Ku saabsan warbixinta iyo is-weydaarsiga xogta ardayga, National Student Clearinghouse® wuxuu ardayda ka fududeeyaa culayska maamul ee saaran. Sii wadida bixinta warbixinta waxbarashada, xog isweydaarsiga, xaqiijinta, iyo adeegyada cilmi baarista, waxay ahaanayaan urur aan faa'iido doon ahayn. Ardayda, dugsiyada, maamulayaasha, iyo codsadayaasha dhamaantood waxay ka faa'iidaystaan ​​waajibaadkooda, kaas oo lagu qabto meel la aamini karo, ammaan ah, iyo deegaan gaar ah.
Intaa waxaa dheer, hogaamiyayaasha waxbarashadu waxay si wanagsan u fahmi karaan dariiqooyinka ardayda iyo natiijooyinka iyagoo isticmaalaya xogta qaranka ee Clearinghouse.
Sida urur aan faa'iido doon ahayn, Xarunta Cilmi-baarista Ardayga Clearinghouse® waxay bixisaa macluumaadka ku saabsan waddooyinka waxbarashada ardayda waxayna awood u siinaysaa go'aan-qaadasho xog-ogaal ah oo dhexmara ardayda mustaqbalka iyo kuwa hadda jira, machadyada tacliinta sare, gobollada, degmooyinka, iyo dugsiyada sare.
Waa maxay Goobaha Adeegga ee Guriga Nadiifinta Qaranka?
Gurigan nadiifinta ayaa leh aagag adeeg oo badan oo ay ka mid yihiin:
Adeegyada Isweydaarsiga Xogta
Daneeyayaasha kala duwan ayaa xogta ku wadaaga isweydaarsiga xogta. Marka loo ogolaado xogta aduunka oo dhan in lahelo, xog iswaydaarsigu waxa ay hurin kartaa xog-ururinta iyo xayaysiisyada ku salaysan. Xogta DMP waxaa loo isticmaali karaa in lagu xoojiyo ololayaasha suuq-geyneed ee aan horay loo helin ama duugoobay.
Clearinghouse waa bixiyaha ugu weyn qaranka ee adeegyada qoraalada dugsiga sare ka dambeeya, waxayna leedahay waayo-aragnimo aan la barbar dhigi karin isweydaarsiga rikoorka ardayga ee elektiroonigga ah.
Xafiisyada kaalmada maaliyadeed waxay diyaariyaan oo gudbiyaan macluumaadka ku saabsan kaalmada maaliyadeed ee kulliyadaha iyo dugsiyada shaqada. Noocyo kala duwan oo kaalmo lacageed ah ayaa laga heli karaa xafiiskan. Ardaydu waxay halkan ka dalban karaan amaahda ardayda, deeqaha, iyo deeqaha waxbarasho.
Adeegyada bilaashka ah ee ay bixiyaan waxaa ka mid ah warbixinno iyo falanqayn si ay uga caawiyaan hay'adaha buuxinta u hoggaansanaanta sii kordheysa iyo shuruudaha qiimeynta ee la xiriira barnaamijyada gargaarka maaliyadeed ee gobolka iyo federaalka.
Si loo gaaro go'aano xog ogaal ah oo ku saabsan barnaamijka, qoondeynta kheyraadka, iyo xeeladaha u doodista si loo sii wanaajiyo hadafyadooda, ururradu waxay u baahan yihiin macluumaad la isku halayn karo oo macno leh oo ku saabsan dadkooda, daneeyayaasha, maalgelinta, adeegga, iyo muuqaalka siyaasadda.
Adigoo isticmaalaya Clearinghouse's macluumaadka aan la barbar dhigi karin ee ku saabsan natiijooyinka waxbarasho ee heerka arday ee dalka oo dhan, waxaan bixinaa adeegyo iyo warbixino kala duwan. Dugsiyada, dugsiyada sare, barnaamijyada wacyigelinta, iyo ururada waxbarashada ayaa dooran kara xalalka. Xarunta Cilmi-baadhistu waxay bixisaa tiro warbixino bilaash ah.
Shakhsiyaadka waxay isticmaali karaan adeegyada xaqiijinta si ay u caddeeyaan inay ku habboon yihiin muuqaal gaar ah, sida inay ku jiraan ciidamada qalabka sida ama arday. Waxay kaloo faa'iido u leeyihiin xaqiijinta shaqada hadda iyo shaqada.
Haddi ganacsiyada ama shakhsiyaadka ay isticmaalaan adeegga hubinta jeegga si ay u xaqiijiyaan saxnimada jeegga ama qabyada la soo bandhigay ama si loo xaqiijiyo taariikhda qofka koontada haya, waxay u ogolaataa inay labadaba sameeyaan.
Isha lagu kalsoon yahay ee Qaranka ee Shahaadada Ardayga iyo Xaqiijinta Diiwaangelinta
Ardayda iyo alumni waxay si fudud u maamuli karaan oo ula socon karaan codsiyada xaqiijinta iyagoo u maraya adeegyada khadka tooska ah ee Clearinghouse kharash la'aan, iyo sidoo kale inay ka bixiyaan dhammaan caddaymaha akadeemiyadeed ee Clearinghouse iyagoon wax kharash ah ku bixin. Ganacsiyada iyo ururada kale waxay ku kalsoon yihiin Clearinghouse inay xaqiijiyaan aqoonsiga waxbarashada.
Gacmaha kala duwan ee Guriga Bannaynta Ardayga Qaranka
Isdiiwaan gelinta kuleejka sii socota iyo macluumaadka shahaada ee ku saabsan alumniyadooda, kumanan kun oo dugsi sare ah ayaa ku tiirsan Clearinghouse. Xafiisyada waxbarashada gobolka iyo degmooyinka ayaa sidoo kale ka faa'iidaysta adeegyadayada. Helitaanka waxbarashada waxaa qiimeeya Clearinghouse oo qayb ka ah barnaamijyada wacyigelinta.
Adeegyada qoraalka qoraalka ah iyo cilmi baarista waxbarashada waxaa bixiya National Student Clearinghouse® si ay uga caawiso dugsiyada sare ee Mareykanka iyo degmooyinka inay horumariyaan diyaargarowga kuleejka iyo guusha.
Marka laga soo tago buuxinta u hoggaansanaanta, hawlgelinta, gelitaanka ardayda, iyo baahiyaha isla xisaabtanka, Clearinghouse waxay ka caawisaa hay'adaha inay horumariyaan awoodooda gorfaynta iyo u hoggaansanaanta. Clearinghouse waxa ay siisaa adeegyo xaqiijin iyo ka warbixinta badi machadyada sare ee Maraykanka, iyo sidoo kale adeeg cilmi-baadhiseed oo gaar ah oo loo yaqaan StudentTracker. Waxa u dheer bixinta beddelka diiwaannada ardayga elegtarooniga ah iyo dalbashada qoraalka dugsiga sare kadib, Clearinghouse sidoo kale waa bixiyaha ugu weyn qaranka adeegyadan.
Sannadihii la soo dhaafay, waxaan ballaarinay adeegyadeena si aan u daboolno baahiyaha sii kordhaya ee machadyada kaqeybqaata ee u hoggaansanaanta, maamulka, helitaanka ardayda, iyo arrimaha la xisaabtanka. Adeegyadooda waxaa loogu talagalay inay fududeeyaan u hoggaansanaanta FERPA, Sharciga Waxbarashada Sare, iyo sharciyada kale ee lagu dabaqi karo.
Iyada oo la kaashanaysa hay'adaha waxbarashada ee joogtada ah, oo ay ku jiraan wakaaladaha gobolka iyo kuwa maxalliga ah, Clearinghouse wuxuu si sax ah u qiimeeyaa dadaalka dugsiyada K-20 iyo barnaamijyada wacyigelinta si loogu taageero ardayda waxbarashada sare. Bixiyeyaasha maaliyadda waxbarashadu waxay dhimi karaan kharashyada waxayna yareyn karaan waraaqaha iyagoo ka qayb qaadanaya Clearinghouse.
Ururada warshadaha waxbarashada iyo kuwa taageera waxay ka faa'iidaysan karaan xalalka Ardayga Qaranka ee Clearinghouse.
Loo-shaqeeyayaasha leh shaqo furan iyo shaqo-doonayaal aqoon leh ayaa la isugu keenaa adeegyada ay bixiso Adeegga Shaqaalaha. Macaamiishu waxay dooran karaan inay iskood u adeegaan ama ay caawimaad ka helaan shaqaalaha haddii ay u baahdaan. Macaamiisha leh baahiyaha gaarka ah waxay sidoo kale ka heli karaan adeegyo degdeg ah Adeegga Xoog-shaqaynta.
Gudaha Maraykanka, Clearinghouse wuxuu fududeeyaa xaqiijinta shahaadooyinka tacliimeed ee kumanaan shirkadood iyo ururo ah. Ilaha xogta waxbarashada-nooc-nooc ah, oo ay ku jiraan shahaadooyinka ku salaysan warshadaha, ayaa sidoo kale noo suurtagelinaya inaan bixinno xalal warshadeed ku salaysan iyo kuwo caado ah.
Fadhiyada tooska ah
Waxaad ku arki kartaa dhammaan dhacdooyinkayada jadwalka dhacdada oo buuxa.
Qaab dhismeedka Kharashka Guriga Nadiifinta Qaranka
StudentTracker® ee wacyigelinta
Warbixinada heerka isdiiwaan gelinta dugsiga sare ka dib ee ka qaybgalayaasha barnaamijka wacyigelinta dalka oo dhan.
Xadka Faylka Xogta: 12 soo gudbin
Xadka Diiwaanka Sannadlaha ah: 5,000 diiwaan
Xisaabaadka Isticmaalaha Shabakadda ugu badan: 5 isticmaale $ 595 sanadkiiba
Barnaamijka Dhexdhexaadka ah
Xadka Faylka Xogta: 15 soo gudbin
Xadka Diiwaanka Sannadlaha ah: 10,000 diiwaan
Xisaabaadka Isticmaalaha Shabakadda ugu badan: 10 isticmaale $ 1,000 sanadkiiba
Xadka Faylka Xogta: 20 soo gudbin
Xadka Diiwaanka Sannadlaha ah: 20,000² diiwan
Xisaabaadka Isticmaalaha Shabakadda ugu badan: 15 isticmaale $ 2,500 sanadkiiba
Ka hel macluumaad buuxa Qaabdhismeedka Ujrada
Marka lagu daro badbaadinta bulshada waxbarashada, ardayda, iyo canshuur bixiyayaasha in ka badan $750 milyan sanadkii, ardayga Qaranka ClearingHouse waa lamaane la aamini karo, dhexdhexaad ah in ka badan 3,600 kulliyadaha iyo jaamacadaha.
Hogaamiye ka tirsan bahda waxbarashada, waxay abuuraan hanti badan, waxay ku fikiraan hogaaminta, iyo fikirka hogaaminta ka faa'iidaysata hay'adaha, barayaasha, siyaasad-dejiyayaal, iyo ganacsiyo.
Guriga Nadiifinta Ardayda - NatArdayga isleeyahay
Xaqiijinta NSC - Ku Soo Dhawoow Adeegyada Xaqiijinta
Falanqaynta Kuliyada Gobolka Palm Beach| Gelitaanka, Waxbarashada
10ka Kulliyadaha ugu Fiican ee Daabacaada iyo Tafatirka
Jaamacadda Concordia Irvine: Heerka aqbalaadda, Barnaamijyada
Jaamacadda Savannah State University 2022 [UPDATED]
Xageen Ka Daawan Karaa Baseball Khadka Khadka tooska ah ee Kulliyada? | Tilmaanta buuxda
Hoos u dhigista fikradahaaga waa geedi socod caajis ah. Marar badan, waxay qaadataa saacado badan in la qoro…
Kuma filna inaad jeclaato ciyaaraha, waa inaad u muujisaa taageeradaada kooxaha aad jeceshahay…
Dib -u -eegista Shopkick 2022: Sharci ama khiyaano/Sida ay u shaqeyso
In lagu abaalmariyo iibsashada waxeey iila muuqataa guul-wada. Shopkick waa mid ka mid ah abaalmarinta ugu sareysa…
Waxay Ka Shaqaysaa Faallooyinka 2021: Alaabada | Saxiixyada | Xalaal Mise Fadeexad?
Sarah ayaa maalin maalmaha ka mid ah fariin igu soo dirtay Instagram-ka iyada oo i waydiinaysa haddii aan xiisaynayo in aan tijaabiyo It Works Products…